Newsflash: Mbola zava-dehibe ny paikady | Martech Zone
Newsflash: Mbola zava-dehibe ny paikady
Talata, Septambra 29, 2009 Zoma, Martsa 11, 2016 Adam Small
Tato ho ato dia henoko be ny resaka maro momba ny varotra toa ny afo! noho ny Vonona. Aim. Fire! Fantatro fa tery ny tetibola ary ny mpivarotra sasany dia somary mamoy fo. Fa miangavy aho, manaova soa ary tsarovy ny paikady ao ambadiky ny tetika izay androsoanao amin-kafanam-po tokoa.
Raha mbola tsy nanam-potoana kelikely ianao dia tena mamporisika anao aho hamerina hijery ny paikadinao macro amin'ny ambaratonga sasany. Manontania tena toy ireto manaraka ireto:
Inona no ijoroantsika?
Iza ireo mpanjifa, aiza izy ireo ary inona no karakarain'izy ireo?
Iza ny fifaninanana ary inona no ambaran'izy ireo amin'izao andro izao?
Inona no maha samy hafa antsika?
Inona no tianay hiavaka amin'ny orinasantsika amin'ny taona manaraka?
Tsy mila mandany andro na ora maro akory izany ary ho schmancy mahafinaritra daholo. Ataovy fotsiny. Ary soraty ho valiny ny valiny. Hevitra tsara tsy mandeha tsara ny fanaovana izany matetika. Mieritrereta isaky ny telo volana.
Diniho avy eo ny paikadinao bitika. Inona ny tetika hifandray amin'ny prospect sy ny mpanjifanao amin'ny fomba hanomezan-dry zareo hoot anao? Ahoana no hahafantaranao rehefa mahavita fatra fahombiazana ianao? Misy fantsona mora raisinao ho anao fa mila mifanaraka? Ahoana no ahafahanao mampifangaro ny hafatrao sy ny sarinao amin'ny fikitika rehetra anao?
Ankehitriny, mandrosoa ary mahazoa fahafinaretana rehetra momba ny fampielezan-kevitra miovaova na ny blitz media sosialy. Raha mifanaraka amin'ny paikadinao.
Tags: marikapaikady marikafanontaniana momba ny atiny
Ferana ny pejy ao amin'ny WordPress mitaky fidirana
Ahoana ny fametrahana ny andrasana amin'ny mpanjifa mailaka ary handresy!
Sep 29, 2009 ao amin'ny 1: PM PM
Amen! Heveriko fa ny ankamaroan'ny olana dia tsy an'ny mpivarotra, na izany aza… miaraka amin'ny sefony izany. Raha tsy hoe alefa gazety, fanambarana an-gazety, lahatsoratra bilaogy na tweet aza dia mivoaka, be loatra ny sefo mihevitra fa tsy manao ny asany ny marketing. Raha toa ka misy CEO maro kokoa mametraka fanontaniana stratejika amin'ny departemantan'ny marketing ary mampiadana ny teknika fipoahana sy fipoahana dia afaka mampivelatra ny orinasany tokoa izy ireo.
6 Okt 2009 amin'ny 12:14 PM
Raha tsy misy ny paikady dia miafara amin'ny dokambarotra mandresy… izay tsy mivarotra vokatra.